Qaxootiga ku dacdaraysan Muqdisho.
Iimaamka Maxamuud Iimaam Cumar oo soo afjaray Colaadii Siigaale.
Maamulka Maxamed Dhere oo Albaabada isugu dhuftay Iddaacad FM ah oo Jawhar ka shaqaynaysay.
Duqii Magaalada Laascaanood oo Xabsiga loo taxaabay.
Jaamac Maxamed Qaalib oo Rajo Wanaagsan ka muujiyay Shirka Kenya.
Dib u dhac ku yimid bilaabashada Wajiga Saddexaad ee Shirkaa.
Macallin Maxamuud oo sheegay in uu diyaar u yahay in Arrinta Dilkii Wiilkiisa loo bandhigo Sharciga Islaamka.
Maamulka Maxamed Dhere oo Albaabada isugu dhuftay Iddaacad FM ah oo Jawhar ka shaqaynaysay. Isla markaana xabsiga dhigay...
Maamulka Gobalka Shabeeladda Dhexe ee uu Madaxda u yahay Maxamed Dheere ayaa xiray Iddaacad FM ah oo saldhigeedu yahay Magaaladda Jawhar iyo qaar ka mida Wariyayaashii ka shaqaynayay Iddaacadaasi.
Madaxa Wararka Iddaacada Jawhar. C/Qani Shiiq Maxamed iyo Abshir Cali Gabre ayaa Maamulka Maxamed Dheere waxa uu u taxaabay Xabsiga kadib markii lagu eedeeyay inay baahiyeen Barnaamij ka dhan ah Siyaasadda Gobalka, Waxaana labadan Wariye loo xiray ka hadalka Shirka Dib u Heshiisiinta Soomaalida uga socda Kenya oo uu Hogaamiye Kooxeedka Maxamed Dheere sheegay inuu fashilmay kadib markii uu Isbahaysi uga dhawaaqay Jawhar.
Wariye ka tirsan Iddaacadaasi oo qadka Taleefoonka aan kula xiriiray isla markaana codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in labadan wariye loo xiray kadib markii ay tabiyeen Warar ay ka heleen Nairobi oo ka hadlayay Kulanka Wasiiradda Arrimaha Dibadda ee IGAD. Waxaana uu wariyahan sheegay in marar badan oo hore loo soo gudbiyay Hanjabaado ku aadan in la ciqaabi doono haddii aysan u hadlin sida uu Maamulka Maxamed Dheere rabo. Laakiin waxa uu sheegay inay go’aankaasi dhagaha ka furaysteen si ay u illaaliyaan Doorkooda dhex dhexaadnimo.
Tallaabadan lagu xiray labada Wariye iyo Saldhigii Warbaahineed ee ay ka shaqaynayeen ayaa qayb ka ah qorshayaasha ay ku doonayaan Qabqablayaasha dagaalka ee Somalia inay ku caburiyaan Saxaafadda Xorta ah ee 14 kan sanno ka hana qaaday Dalka. Waxaana ay Suxufiyiinta Madaxa Banaan ee Soomaaliyeed ka dalbadeen Maxamed Dheere inuu si deg deg ah u soo daayo Wariyayaashaasi isla markaana u oggolaado Iddaacadii FM-ka ahayd ee Magaaladaasi inay dib u billawdo Hawlaheedii Warbaahineed.
Aabihii Dhalay wiilkii lagu dilay Iskuulka Al-fajri oo wacad ku maray inaan dib loo furi Karin.......
Aabaha dhalay Wiilkii lagu dilay Dugsiga Al-Fajri ayaa sheegay inaan dib loo furi Karin Dugsigaasi inta Sharciga laga horkeenayo Gacandhiiglihii dilka gaystay iyo Maamulaha Iskuulka oo uu sheegay inuu amray dilka Wiilkiisa.
Macallin Maxamuud waxa uu sheegay inuusan aqbali Karin in iyadoo Dhiigii Wiilkiisu uu ka qoyan yahay Banaanka Iskuulka in dib loo furo Iskuulka isla markaana ay Ardayda kale ku tuntaan goobtii lagu daadiyay Maskaxda Wiilkiisa. Wuxuuna sheegay inay taasi ula muuqato in Wiilkiisu uusan lahayn Tixgalin Bini’aadanimo.
Macallin Maxamuud waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in Arrinta Wiilkiisa loo bandhigo Sharciga Islaamka. Wuxuuna sheegay inuu ku qanci doono wixii ay arrintaasi ku xukunto Shareecada Islaamka. Laakiin waxa uu sheegay inuusan marnaba aqbalayn in arrinta Wiilkiisa lagu dhameeyo qaab Beeleed.
Xasan Macalin Maxamuud oo ka mid ahaa Ardayda Dugsiga Al-Fajri ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa si bareer ah u toogtay mid ka mida Illaaladda dugsigaasi kadib markii ay ardaydu Banaanbax ka sameeyeen Banaanka Dugsiga. Waxaana sidoo kale isla goobtaasi ku dhaawacmay labo Arday oo kale.
Maamulka Dugsigaasi iyo Guddiga Waalidiinta ayaa shalay shir ay ku yeesheen Iskuulkaasi waxay gabagabadiisii ku dhawaaqeen in Iskuulka dib u billaabayo hawlihiisii. Waxayna sheegeen in laga cafiyay Lacagihii Muranka dhaliyay ee Maamulka Iskuulku waydiistay Ardayda. Laakiin Ehaladda Wiilka dhintay ayaa sheegay inaysan waxba kala socon shirkaasi. Waxayna ku gacan sayreen in Iskuulkaasi uu dib u hawl billaabo.
Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida uga Socday Kenya inka badan Hal Sanno ayaa mar kale dib loo dhigay waqti aan la cayimin.
Dib u dhacan oo ay ku dhawaaqeen Wasiiradda IGAD ee u xilsaaran Shirka Soomaalida kadib markii ay shalay kulan ku yeesheen Magaaladda Nairobi ayaa lala xiriiriyay kadib markii ay shirka soo wajaheen sida ay sheegeen Dhbaatooyin dhinaca Tasiilaadka ah.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya. Stephan Kolonzo Mosiyooko oo kulankaasi kadib la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegayay in Shirka Soomaalidu uu fashilmay. Wuxuuna sheegay in dib loogu dhigay shirka kadib markii ay suuragali waysay in la keeno Madasha Shirka Odayaasha Dhaqanka. Sidaas darteed waxa uu sheegay inay qorshaynayaan in dhawaan ay billaabaan soo daad guraynta Odayaasha Dhaqanka.
Mosiyooko waxa uu sidoo kale meesha ka saaray in Shirka laga wareejinayo Waddamadda IGAD. Wuxuuna hoosta ka xariiqay in dalalka deriska la ah Somalia ay door muuqda ku leeyihiin Dib u Heshiisiinta Soomaalida. Sidaas darteedna waxa uu sheegay inaan laga wareejin doonin Marti galinta iyo Dhex dhexaadinta Shirka illaa iyo inta ay iyagu ka dalbanayaan.
Jen Jaamac Maxamed Qaalib oo ka mida Xubnaha Ururadda Bulshadda Rayidka ee ka qayb galaya Shirka Kenya ayaa Rajo wanaagsan ka muujiyay Shirka Soomaalida uga socda Kenya.
Jaamac Maxamed Qaalib waxa uu sheegay in la gudo galayo Wajiga Saddexaad ee Shirka Kenya. Wuxuuna sheegay in Beeluhu ay billaabi doonaan Hanaanka Awood Qaybsiga oo ku salaysnaan Dooba 4.5.
Mar uu ka hadlayay Jaamac sida laga yeelayo Hogaamiyayaasha ka maqan Shirka. Waxa uu sheegay in Shirku uusan hadda wixii ka dambeeya u lug xirnaan doonin Qab Qablayaal dagaal oo sida uu sheegay dano gaar ah leh, Wuxuuna sheegay in Beesha Caalamka iyo Soomaalidu ay garteen cidda hortaagan Nabada Somalia. Inkastoo uu ka gaabsaday inuu magacaabo dadka hortaagan Nabada Somalia.
Janaraalku waxa uu sheegay in Kulankii Wasiiradda Arrimaha Dibadda ee IGAD ay iskula garteen Wasiiraddu in Shirka aan cidna loo hakin isla markaana si deg deg ah loo billaabo qaybaha ka dhiman Shirka. Wuxuuna sheegay inay IGAD ku guulaysatay Xallinta Khilaafaadkii dhexdeeda ahaa.
Dhinaca Wakiiladda Beesha Caalamka ee ka qayb galaya Shirka Kenya ayuu sheegay Janaraalku inay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan Taageeradii dhaqaale ee ay siin jireen Shirka Kenya. Wuxuuna sheegay in Beesha Caalamku ay u heeloon tahay Soomaalida. Laakiin waxa uu sheegay in haddii ay Soomaalidu ku fashilanto inay fursadaasi ka faa’iidaysato ay dhici doonto inaan Caalamku mar dambe isku shuqlin Xallinta Mashaakilaadka Dhibaatadda Somalia.
Booliska Maamul Gobaleedka Punt Land ayaa xabsiga u taxaabay Duqii Magaaladda Laascaanood.
C/risaaq Maxamuud Waranle ayeey shalay Boolisku ka taxaabeen Gurigiisa oo ku yaalay Magaaladda Laascaanood. Waxayna wararku sheegayaan in loo gudbiyay Xabsi ku yaala Magaaladda Garoowe ee Caasimadda u ah Maamul Gobaleedka Punt Land.
Sarkaal u hadlay Booliska Laascaanood ayaa ku eedeeyay Masuulkan inuu ka waday Magaaladdaaasi olole uu ku doonayay inuu Nabadgalyo xumo uga abuuro Laascaanood. Wuxuuna sheegay inuu Lacago ka soo qaatay Magaaladda Hargaysa. Dabeetana uu ka billaabay Laascaanood kulamo iyo shirar uu ku xagal daacinayo Maamul Gobaleedka Punt Land. Waa sida uu hadalka u dhigayee.
Ehaladda C/risaaq Waranle ayaa ku tilmaamay eedaymaha ka soo yeeray Booliska Punt Land kuwo ay ugu mar marsiyoonayaan inay ku dhaafiyaan Xoriyadiisa Shaqsiyadeed. Waxayna sheeegeen in Waranle uu muddo bil joogay Laascaanood oo uusan wax safar ah galin. Isla markaana uu ku mashquulsanaa Xanaanaynta Aaabihiin oo xanuunsan. Iyagoo ka dalbaday Maamulka Punt Land inay si deg deg ah Xoriyadiisa ugu soo celiyaan Waranle.
Dhinaca Kale Wareegto ka soo baxday Xafiiska Wasiirka Ganacsiga ee Punt Land. Faarax Yuusuf ayaa lagu amray in la xiro Warshadda Kalluunka Laas Qoray ee Gobalka Sanaag. Kadib markii sida wareegtadaasi lagu sheegay ay shaqaaluhu billaabeen inay Bililiqaystaan Qalabka Warshadaasi dabeetana ay u dhoofiyaan Dalka Dibadiisa. Waxaana uu Wasiirku ku amray Maamulka Gobalka Sanaag inay la wareegaan Masuuliyadda Warshadaasi.
Wasiirka Warfaafinta ee Punt Land. C/kariin Cali Mahdi ayaa isna ku eedeeyay Warshadda Laasqoray inay Maamulkeedu ka soo horjeedaan Siyaasadda Punt Land. Wuxuuna sheegay in shaqaalaheedu ay galeen Arrimo Siyaasadeed oo Qatar galin kara Jiritaanka Maamulkooda. Inkastoo uu inta badan ka gaabsanayay inuu ka jawaabo Su’aalihii ay Warbaahintu Waydiinayeen.
Warshadda Laasqoray waxay ka mid tahay Warshadaha Farakutirska ah ee ka badbaaday Burburkii soo gaaray Somalia. Waxaana gacanta ku hayay Ganacsato reer Sanaag ah. Iyadoo Kalluunkeeda oo Tayadiisu aad u saraysana laga isticmaalo Somalia oo dhan.
Iimaam Maxamuud Iimaam Cumar oo ka mida Odayaasha Dhaqanka ee sida wayn looga tixgaliyo Koonfurta Somalia ayaa ku guulaystay inuu soo afjaro Xiisadii Colaadeed ee muddooyinkan ka aloosnayd Deegaanka Siigaale oo Ka tirsan Degmadda Hodan ee Magaaladda Muqdisho.
Iimaam Maxamuud oo labadii Toddobaad ee la soo dhaafay fariisin ka dhigtay goobtii ay ku hardamayeen Labada Maleeshiyo Beeleed ayaa ugu dambayntii waxa uu ku guulaystay inuu ku qanciyo labadii dhinac ee isku haystay deegaankaasi inay Miiska Wadahadalka isugu yimaadaan. dabeetana waxa ay kala saxiixdeen Heshiis lagu soo afjarayo Colaadii Sokeeye ee deegaankaasi ka socotay.
Iimaamku waxa uu ku canaantay Odayaasha Labada Beelood inay ka gaabiyeen Xalinta Dagaalkii u dhaxeeyay Maleeshiyooyinka Labada Beelood. Wuxuuna waydiistay inaysan hadda kadib dhicin in la isku laayo Dhalinta Labada Beelood.
Iimaamku waxa uu markii ugu horaysay meel fagaare ah sidoo kale ka sheegay Mawqifkiisa ku aadan Shirka Kenya. Wuxuuna Sheegay in Kenya aysan marti galin Karin shir Soomaaliyeed haddiiba ay Mamnuuceen Baasaboorka Somalia. Wuxuuna sheegay inuusan tagayn Kenya inta ay ka noqonayso go’aanka ay ku mamnuucayso Baasaboorka Somalia.
Colaada Siigaale oo noqotay mid ka mida Dagaaladii sokeeye ee ugu dheeraa Muddooyinkan Muqdisho. Waxa uuna dagay goobtii dagaalku ka socday. Isagoo sheegay inuusan ka tagayn Goobtaasi inta xal nabadeed laga gaarayo.
Qaar ka mida dadka soo barakacay ee ku nool Xeryaha Qaxootiga Magaaladda Muqdisho ayaa ka cabanaya Dhibaato dhinaca nolosha ah oo soo wajahday.
Xeradda Qaxootiga ee Warshadii hore ee Coca Cola ayaa lagu soo waramayaa inay soo food saareen dhibaatooyin dhinacyo badan leh. Waxaana ay ka cabanayaan dadkaasi helitaanka Maciishadda iyo Cuduro ka dilaacay Xeradaasi,
Maye Muumin Caliyoow oo ka mida Odayaasha Xeradaasi ayaa sheegay inay ku adkaatay Helista Maciishadda kadib markii ay Odayaashii Qoysasku ku mashquuleen Cuduro ka dillaacay Xeradaasi. Wuxuuna sheegay in Xeradaasi ay ka dillaaceen cuduro ay ka mid yihiin Maleeriyo iyo Daacuun Caloole.
Cabashadda ka timid dadkan ku nool Xeradda Qaxootiga ee Coca Cola ayaa timid xilli ay Roobabkii gu’ga ka billawdeen Muqdisho. Waxaana dadka ku nool Xeryaha Qaxootigu ay ka cabanayaan sidoo kale dhinaca Hoyga oo ay sheegeen in Buushashka ay dagan yihiin aysan xilligan celin Karin Roobabka billawday.
Qaramadda Midoobay oo ansixisay.
Golaha Ammaanka ee Qaramadda Midoobay ayaa 140 Cod ku oggolaaday Qaraar dalal ay Malaysia ka mid tahay u soo gudbisay Golaha isla markaana qeexayay in la aqoonsado Jiritaanka Qaranimo iyo Dhuleed ee Falastiin.
Qaraarkan ayaa qeexaya in Dhulkii Isreal ay ka qabsatay Falastiiniyiinta Sannadii 1967-dii ay leeyihiin Dadka Falastiiniyiinta ah. Waxaana qaraarkan uu Cambaaraynayaa haysashadda Dhuleed ee Yuhuudu ay haystaan Dhulka Falastiiniyiinta.
Qaraarkan oo ay golaha soo hordhigeen 28 dal oo Carab u badan ayaa waxaa ka hor yimid 6 Dawladood. Waxaana ka aamusay 11 kale. Iyadoo Wakiiladda Golaha ee Carabtana ay ku tilmaameen Qaraarkan mid meesha ka saarayaa Qorshayaashii lagu dulmayay Falastiiniyiinta ee Sharon. Waxayna sheegeen in la gaaray xilligii laga hortagi lahaa Gardaradda ay Yuhuudu ku duudsiinayso Falastiiniyiinta Xaqooda Dhuleed.
Ganacsato Soomaaliyeed oo Ku Socdey Soomaaliya oo Lagu Xayiray Garoonka Diyaaradaha ee Nairobi
Ganacsataddan waxaa is hortaagey Booliska Kenya kadib markii ay diideen inay bixiyaan Lacago Laaluush ah. Guji